Zvokudya zvinowedzera | Zvokudya & Zvokudya | Mapeji evaravara ehurukuro
Chirwere chinowedzera kusimbisa kushaya kurasikirwa
Kubatsirwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana
Mhando yezvokudya zvinowedzera kuderedza uremu zvakanaka. Vose vanovimbisa kuonekwa kurasikirwa kwemahombekombe vasina kunzwa nzara munguva pfupi. Zvose izvi pasina zvirongwa zvekudya zvakajeka uye kunyange pasina maitiro. Asi chii chinonyanya kukosha pamusoro pehuwandu hunorema kurasikirwa? Chengetedza vimbiso yako kana kuti uzviratidze kunyange zvisina kunaka?
Idzi ndidzo dzinonyanyozivikanwa mapoka mapoka
Das Kutengeswa kwezvokudya zvinowedzera, iyo inopikira kurara nekukurumidza kuora muviri, yakawanda-yakakura.- Zviratidzo zvinoputika, izvo zvinonzi zvinodya zvekudya, zvakaderera-calori uye zvakagadziriswa nemakakirini anokosha emaprotheni powder.
Superfood uye zvokudya zvinowedzera
Detoxifiers zvichaita dehydrate muviri kuderedza uremu verlieren.- mafuta blockers, mafuta burners uyewo kudzivisa zvinogona kubva yaipiwa kuburikidza chikafu Fette.- Kohlehydratblocker tunodzivisa Verdauungsenzym.- waida kuti carbohydrate-kukamurwa
Maitiro ekudzvinyirira anoderedza kunzwa kwenzara nemishonga yakadai se caffeine, guarana kana mate zvidzitiro.- Superfood smoothies inovimbisa kushaya kurasikirwa pasina kudya; ivo zvechokwadi vane utano.
Zvose izvi zvinonzi zvinokubatsira kuti uremerwe uremu uye unzwe uine hutano hwakanaka uye wakanakira munguva pfupi.
Zvose zvinogadzirwa zvezvipfeko izvi zvinodaro zvinotaura nekutenda kwakasimba kwekuti chigadzirwa chavo chinotungamirira kukundira kwekutendeseka uye kusingaperi kwehutano hwemuviri. Uye vose vasina Kuchinja kwekudya kana basa rakasimba.
Chikamu chechiitiko chinoshanda chiri mukuenderana nezvipikirwa izvi. Kunyange zvakadaro, kuderedza kuyerwa nekubatsirwa kwezvokudya zvinowedzera kunofanira kuongororwa zvakananga. Nokuti urongwa hwekusavhiringidza hunoita kwenguva yakareba sekubatsirwa.
Pakati pezvinyorwa zvinoshanda zvakanyanya ndezvokudya zvekudya, apo mapuroteni powder uye / kana superfood inosanganiswa nemvura kuti igadzikane. Izvi zvakagadzirwa zvakanakisisa zvinokwanisa kupfuurira kudya kunokurudzirwa kubudirira kubudirira.
Chimwe chinhu chevanhu vane utano hwakanaka kune chido chokudzvinyirira chinoderedza kunzwa kwenzara. Kunyanya kana kushanduka kubva kune koriori yakanyanya kudya kune utano hwakanaka, mapiritsi aya achabatsira kwenguva pfupi. Kurasikirwa kwekurema munyaya iyi kunoguma kubva kunoderedzwa koriori kuwanikwa mumamiriro ekudya.
Munyika dzinonzi mafuta uye Kohlehydratblockern ikoko maererano Stiftung Warentest No vanodzidza hwokuti akanaka Effekte.Kein Kudya zvinoreva pasina NachteileKohlehydratblocker anogona kukonzera manyoka uye flatulence vachitsigira mafuta blockers anogona zvokonzera migumisiro zvakadai fecal incontinence, dumbu chinyamunhari chinorwadza kana vhitamini kukanganisika.
Panguva imwechete iyo inokanganisa migumisiro yemishonga yakadai se-anti-baby pill.
Asi Mishonga zvokuwedzera vane kuwedzera vad-vad mugumisiro kumwe kushandiswa mapuroteni Nachteile.- Long-izwi rinodederesa: matambudziko kweropa, kupatira, kunetswa mune Elektrolythaushalt.- Detoxifiers: kunyanyisa uric asidhi yomuropa, yakaderera ropa shuga, Kaliummangel.- havi: pangozi siyana nokuti vanhu vane mwoyo chirwere kana cheBP.
Ive yakaratidza kuti kudya kunowedzera zvakadai semapurotini shakes kana kuda kudya zvinokonzera kupa mazano akanaka uye zvinokurudzira kwenguva shoma. Zvimwe zvose zvinogadzirwa zvinongogadziriswa chete
Kurasikirwa uremu pasina nzara, pasina kudya uye nemufaro
Zvokudya - Nei kuparara kwekudya kunokuita mafuta
Mazano ekuchengetedza mafuta
Zvokudya - Low Calorie Drinks Alternatives
Kudya - kunyatsorasikirwa uremu nemazano maduku